ပရိသတ်တွေထင်သလိုအသက်(၃၅)နှစ်မဟုတ်ဘဲ (၄၃)နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံခဲ့တဲ့မင်းသမီး Lee Ga Ryeong - Cele Gabar
ပရိသတ်တွေထင်သလိုအသက်(၃၅)နှစ်မဟုတ်ဘဲ (၄၃)နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံခဲ့တဲ့မင်းသမီး Lee Ga Ryeong
မင်းသမီး Lee Ga Ryeong ကတော့ ‘Love ft. Marriage & Divorce’ ဇာတ်လမ်းတွဲပြီးဆုံးသွားတဲ့အနေနဲ့ အင်တာဗျူးဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်။ အင်တာဗျူးမှာတော့ သူဟာ(၁၉၈၀)ခုနှစ် မျောက်နှစ်မှာ မွေးဖွားခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေကအံ့သြခဲ့ရတာပါ။ ဒါကတော့ တရားဝင်ဖော်ပြထားတဲ့အသက်ထက်(၈)နှစ်ငယ်နေတာကြောင့်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မော်ဒယ်လ်တစ်ယောက်အဖြစ်လုပ်ကိုင်တဲ့အချိန်မှာတော့ လိုက်ဖက်မယ့်အသက်အရွယ်ကိုပြောင်းလဲလေ့ရှိကြပါတယ်။ Lee Ga Ryeong ရဲ့ ဒီအချက်အလက်တွေကိုအွန်လိုင်းမှာတင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ကိုယ်တိုင်ကမကြေညာလိုက်ရဘဲအတည်ဖြစ်သွားခဲ့တာပါ။ သူကတော့ အမှန်တကယ်အသက်ကိုဖော်ပြဖို့အတွက် အလုပ်တွေအကြာကြီးရပ်နားထားပြီး အေဂျင်စီမရှိတာကြောင့် သတင်းမထုတ်ပြန်နိုင်ခဲ့ကြောင်းလည်း ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
သူကတော့ အေဂျင်စီအသစ်နဲ့အလုပ်လုပ်ကိုင်တော့မှသာ ဒီအကြောင်းကိုရှင်းပြနိုင်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မင်းသမီးကတော့ SBS ဒရမ်မာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ‘A Gentleman’s Dignity’ နဲ့အတူ (၂၀၁၂) ခုနှစ်မှာ ပွဲဦးထွက်ခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင်တော့ ‘Love ft. Marriage & Divorce’ ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲနဲ့အတူ ပရိသတ်တွေကြားမှာအောင်မြင်ကျော်ကြားမှုများစွာရရှိထားပါတယ်။
ပရိသတ္ေတြထင္သလိုအသက္(၃၅)ႏွစ္မဟုတ္ဘဲ (၄၃)ႏွစ္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့တဲ့မင္းသမီး Lee Ga Ryeongမင္းသမီး Lee Ga Ryeong ကေတာ့ ‘Love ft. Marriage & Divorce’ ဇာတ္လမ္းတြဲၿပီးဆုံးသြားတဲ့အေနနဲ႔ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုခဲ့ပါတယ္။ အင္တာဗ်ဴးမွာေတာ့ သူဟာ(၁၉၈၀)ခုႏွစ္ ေမ်ာက္ႏွစ္မွာ ေမြးဖြားခဲ့တဲ့အေၾကာင္းေျပာခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ပရိသတ္ေတြကအံ့ၾသခဲ့ရတာပါ။ ဒါကေတာ့ တရားဝင္ေဖာ္ျပထားတဲ့အသက္ထက္(၈)ႏွစ္ငယ္ေနတာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။
ေမာ္ဒယ္လ္တစ္ေယာက္အျဖစ္လုပ္ကိုင္တဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ လိုက္ဖက္မယ့္အသက္အ႐ြယ္ကိုေျပာင္းလဲေလ့ရွိၾကပါတယ္။ Lee Ga Ryeong ရဲ႕ ဒီအခ်က္အလက္ေတြကိုအြန္လိုင္းမွာတင္လိုက္တဲ့အခါမွာေတာ့ ကိုယ္တိုင္ကမေၾကညာလိုက္ရဘဲအတည္ျဖစ္သြားခဲ့တာပါ။ သူကေတာ့ အမွန္တကယ္အသက္ကိုေဖာ္ျပဖို႔အတြက္ အလုပ္ေတြအၾကာႀကီးရပ္နားထားၿပီး ေအဂ်င္စီမရွိတာေၾကာင့္ သတင္းမထုတ္ျပန္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။
သူကေတာ့ ေအဂ်င္စီအသစ္နဲ႔အလုပ္လုပ္ကိုင္ေတာ့မွသာ ဒီအေၾကာင္းကိုရွင္းျပႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ မင္းသမီးကေတာ့ SBS ဒရမ္မာတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ‘A Gentleman’s Dignity’ နဲ႔အတူ (၂၀၁၂) ခုႏွစ္မွာ ပြဲဦးထြက္ခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ေတာ့ ‘Love ft. Marriage & Divorce’ ဆိုတဲ့ ဇာတ္လမ္းတြဲနဲ႔အတူ ပရိသတ္ေတြၾကားမွာေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားမႈမ်ားစြာရရွိထားပါတယ္။
Posted in International CeleTagged International Cele, Lee Ga Ryeong
Previous post “ပြည်မြို့ လေးဆူဓာတ်ပျော်ရွှေဆံတော်စေတီတော်မြတ်ကြီးမှာ စိန်၁၉ပွင့်ပါတဲ့လက်စွပ်ကို လှူဒါန်းခဲ့တဲ့လင်းလင်း”
Next post ” အာခေါင်မှာအကျိတ်ပေါက်ရာကနေဆိုးရွားလှတဲ့ အခြေအနေကိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့ ၆နှစ်အရွယ်ကလေးလေးအတွက် အလှူငွေ၆၅၀၀၀၀ ကျပ် ကိုလှူဒါမ်းပေးခဲ့တဲ့မိုးစက်”